डोटीमा धारिलो हतियार प्रहार एकको हत्या, अर्का घाइते ! « Nepal Bahas
डोटीमा धारिलो हतियार प्रहार एकको हत्या, अर्का घाइते !
प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७७, मंगलवार २१:१४
११ कार्तिक, डोटी अछामको ढकारी गाउँपालिका–३ गढीहाले बजार नजीकै धारिलो हतियार प्रहार गरी अन्दाजी २० वर्षीय देवेन्द्र थापाको हत्या गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका अनुसार सोही ठाउँका अर्का १६ वर्षीय रुद्र थापा घाइते भएका छन् ।
हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा अछाम प्रहरीले ढकारी गाउँपालिकाकै नरेन्द्रबहादुर बुढालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ । आज बिहान देवेन्द्रको शव तथा उनीसँगै रुद्र गम्भीरावस्थामा फेला परेका थप उपचारका लागि कोहलपुर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अनलाईन ठगी अभियोगमा पक्राउ
एक किलाे गाँजासहित दुई युवा पक्राउ